रोचक Archives »
एजेन्सी । यस्ता खालका युवतीहरु हुन्छन निकै नै भाग्यमानि जानिराखौ ! ज्यो’तिष शा’स्त्रको आ’फ्नै एउटा छु’ट्टै महत्त्व रहेको हुन्छ । ज्यो’तिष शास्त्र’मा असल गुण भएकी कन्या’का बारेमा वा भा’ग्यशाली य’सवतीका बारेमा व्या’ख्या गरिएको छ । युव’तीहरूमा हुने आकार, चि’न्ह, शरी’रका विभिन्न ठा’उँमा भएका को’ठीहरू आँखा स’म्झदारी, चला’ख, स्वभार र श’रीरका विभि’न्न भाग’हरूमा हुने विभिन्न कु’राहरूलाई यहाँ ब्य’ख्या’ गर्न खो’जिएको छ । कस्ता युवती अत्य’न्त भाग्य’शाली हुन्छ’न् त ? यस बारे थाहा पाइ’राख्नुहोस् । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार जुन कन्या को खुट्टाका औंला उठेको, गोलो, रातो रातो देखिन्छ त्यस्ता कन्या भाग्यशाली हुन्छन्…
बिहेपछि श्रीमान को घरमा राज गर्ने यी ४ रासी भएका महिला हरु जानिराखौ ! शा’स्त्रका अनुसार यी रा’शि भएका म’हिलाहरूले आफ्नो श्री’मानको खासै कुरा न’सुन्ने आफ्नै मर्जी च’लाउने, दा’म, साम, द’ण्ड’भेदको समेत प्रयोग गर्ने गर्छन् । घर प’रिवारमा हुने हरेक प्रकारको निर्ण’यमा पनि आफ्नै राज गर्ने ‘अरूको कुरा नसुन्ने र दे’खावटी गर्न मन पार्ने भएका का’रण यस राशि भएका म’हिलाहरू अरूलाई दे’खाउनको लागि भएता पनि काम भने गर्ने ग’र्दछन् । नेतृत्व भूमिका निभा’उने खुबी हुने गर्दछ भने परि’वारमा हुने हरेक का’र्यमा समेत अ’गाडी हुने भएका कार’ण परिवारमा यस राशि भएका…
ए’जेन्सी । सं’सारकै सबैभन्दा ध’नी अ’भिनेता यि’नको तलब सु’न्नुभयो भने चकित पर्नु’हुन्छ ! संसार मा येस्ता अ’भिनेता छन् ज’सको तलब सु’न्दा हामीलाई अ’चम्म लाग्छ ! यि’नलाई द रक भनेर पनि चि’निन्छ तर यिनको नाम ‘ड’वेन जोन सन् हो यदि त’पाइले रे’स्लिंग हेर्नु’भएको छ भने यि’नलाई सजिलै चि’न्न सक्नुहुन्छ’ ! प’हिलाका रे’स्लर हुन् रे’स्लिंग छोडेर ह’लियुड तिर लागेका र’क यति फेमस भएकी उनको जति तल’ब कुनै अ’भिनेता को छैन संसार मा हा’लचालको सू’चीअनुसार उनलाई संसार कै सबै’भन्दा धनी अभि’नेता भनेर पनि चिनिन्छ ! रेस्लिं’ग का किं’ग केही वर्ष देखि अ’भिनय मा…
सास्त्रका अनुसार यस्ता व्यक्तिको हातमा कहिले पनि पैसा टिक्दैन जानिराखौ
एजेन्सी : सास्त्रका अनुसार यस्ता व्यक्तिको हातमा कहिले पनि पैसा टिक्दैन जानिराखौ : शास्त्र मा लेखिए अनुसार हाम्रो सारिर मा हुने कोठी को धेरै नै महत्व रहन्छ हामीले जति पैसा कमाएपनि हाम्रो यी अंग हरुमा कोठी छ भने हाम्रो हातमा पैसा टिक्दैन समुन्द्र शास्त्र का अनुसार हाम्रो सरिरमा हुने कोठीहरुले सबै ठाउ ठाउ बाट फरक अर्थ दिई राखेका हुन्छन सबै कोठीहरुको छुट्टाछुट्टै महत्व छ ! कतिपय भागमा हुने कोठी ले हाम्रो जीवनमा धेरै राम्रो फल दिएका हुन्छन भने कतिपय ठाउमा हुने कोठीले नराम्रो फल दिएका हुन्छ ! हाम्रो सारिर को…
ट्रेन्डिङमा रहेको अनुहार बुढो देखाउने ‘फेस एप’ प्रयोग गर्दा यस्तो जोखिम….। पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौँ २, साउन । नेपालमा २/३ दिन यता एक एप्लिकेसन भाइरल भएको छ । युवा अवस्थाका मानिसलाई बुढो देखाउने ‘फेस एप’को प्रयोग सेलिब्रेटिहरूले समेत गरेपछी नेपालमा यो भाइरल भएको हो । यो एप्लीकेसन सन् २०१७मा एक रसियन कम्पनीले गुगल प्लेस्टोरमा सार्वजनिक गरेको थियो । लन्च गर्ने बेला यो एप्सको खासै चर्चा भने भएन । तर अहिलेको विश्वकप क्रिकेट सकिएपछी भारतीय क्रिकेट खेलाडीले यो एप्सको प्रयोग गरी तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछी नेपालमा पनि भाइरल भएको हो । मंगलबार र बुधबार नेपाली फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरुले यो एप्सको निकै प्रयोग गरेका…
दुवै हात नभएकी २३ बर्षीय मोडल मौलि देखियिन यस्तो बोल्ड अबतार मा तस्बिर भयो भाइरल हेर्नुहोस ७ तस्बिर
एजेन्सी : दुवै हात नभएकी २३ बर्षीय मोडल मौलि देखियिन यस्तो बोल्ड अबतार मा तस्बिर भयो भाइरल हेर्नुहोस ७ तस्बिर : २३ बर्षीय मोडल जसको दुवै हात छैन दुवै हात नभएर पनि मोडलिंग सुरु गरेकी छिन ! अहिले २३ बर्षकी भइन ! उनि क्यालिफोर्नियाकी हुन् ! उनको आफ्नो हात नभएपनि उनि नक्कली हातको प्रयोग गरेर एकदमै सुन्दर देखिन्छन ! यो देखिएको उनको हात सर्जिकल अप्रेसनबाट तयार पारिएको हो । अर्को हात पुरा नै छैन् । तैपनि उनले दुवैवटा हात विना नै चर्चित मोडेल बनेर एक प्रेरणाकी पात्र बनेकी छिन् ।…
एजेन्सी । विश्वकै धनी व्यक्तिको नामले चिनिने माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालिक विल गेट्स हुन् । पछि एक अध्ययन प्रतिवेदनले बिल गेट्स र उनकी पत्नी मेलिण्डा गेट्स दुवै विश्वकै सबै भन्दा धनी जोडी बनेको देखाएको थियो । सन् १९७५ मा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टका सह संस्थापक रहेका बिल गेट्सले सन् १९९४ मा त्यहीँकी एक कर्मचारी मेलिण्डा सँग विवाह गरेका थिए । उनको ब्यपार बिजनेसका बारेमा हामीले थुप्रै खबरहरू थाहा पाउँदै आएका छौ । तर आज भने हामी उनको व्यक्तिगत (निजी) जीवनको बारेमा चर्चा गर्ने छौ । मेलिण्डा गेट्स बिल गेट्स की…
संसारकै सबैभन्दा धनी अभिनेता यिनको तलब सुन्नुभयो भने चकित पर्नुहुन्छ ।
एजेन्सी । संसारकै सबैभन्दा धनी अभिनेता यिनको तलब सुन्नुभयो भने चकित पर्नुहुन्छ ! संसार मा येस्ता अभिनेता छन् जसको तलब सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्छ ! यिनलाई द रक भनेर पनि चिनिन्छ तर यिनको नाम डवेन जोन सन् हो यदि तपाइले रेस्लिंग हेर्नुभएको छ भने यिनलाई सजिलै चिन्न सक्नुहुन्छ ! पहिलाका रेस्लर हुन् रेस्लिंग छोडेर हलियुड तिर लागेका रक यति फेमस भएकी उनको जति तलब कुनै अभिनेता को छैन संसार मा हालचालको सूचीअनुसार उनलाई संसार कै सबैभन्दा धनी अभिनेता भनेर पनि चिनिन्छ ! रेस्लिंग का किंग केही वर्ष देखि अभिनय मा…
मध्यरातमा निद्रा बाट बिउँझिएर नगर्नुहोस् यी ५ कामहरू । शरीरलाई हुन्छ खतरा । जानिराख्नुहोस्
एजेन्सी । हामी धेरै जसोको बानी मध्यरातमा निद्रा बाट बिउँझने हुन्छ । कुनै नराम्रो सपना देख्दा वा अन्य कारणले गर्दा हामी बिउँझिएका हुन्छौ । ब्युँझिएपछि हामीहरूलाई फेरी निदाउन निकै कष्ट हुन्छ । धेरै कोसिस गर्दा पनि निन्द्रा पर्दैन । यस्तो अवस्थामा धेरै मानीसहरूले आफ्नो स्वास्थयलाइ असर पुर्‍याउने र गर्न नहुने काम गरिरहेका हुन्छन् । यहाँ हामीले मस्त निन्द्राबाट ब्युँझदा गर्न नहुने कामको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेका छौँ । चुरोट पिउनेः राति ब्युझिएपछि चुरोट पिउनु हुँदैन । चुरोट पिउनाले फेरि निन्द्रा पर्न गाह्रो हुन सक्छ । किनभने चुरोटमा हुने निकोटिनले निन्द्रामा…